Google Pixel3XL သည် Geekbench ကိုဖြတ်သန်း။ Android P | Androidsis
အဖြစ် Google က Pixel3XL သူတို့ကချဉ်းကပ်နေကြတယ်၊ ငါတို့ကအရေးကြီးတဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုသိလာပြီ။ ယခု GeekBench မှထုတ်ဖော်ပြောကြားသောမကြာသေးမီကအချက်အလက်များကြောင့် ကျနော်တို့က၎င်း၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များအချို့ကိုငါသိ၏.
ယခင်က Pixel3XL ၏ပုံစံဒီဇိုင်း သူကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာထစ်ပြတယ်။ ၎င်းကိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကုမ္ပဏီကဝေဖန်ခဲ့သည်။ သို့သော်ယခုအရာအားလုံးက Google သည်နုတ်ထွက်ကြောင်းနှင့်၎င်းကို terminal ထဲသို့ထည့်သွင်းသွားမည်ကိုဖော်ပြနေသည်။
အခြေခံစံနှုန်းမှရရှိသောအချက်အလက်များအရ၊ Pixel3XL သည် Android P နှင့်အတူတူဖြစ်သည်, Android ဖုန်း၏နောက်ဆက်တွဲဗားရှင်းကိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဒါကိုမျှော်လင့်ထားရမယ်၊ အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အမှတ်တံဆိပ်ပိုင်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ခြင်း၊ အခြားကုမ္ပဏီများမှအခြားမိုဘိုင်းဖုန်းများမတိုင်မီနောက်ဆုံးပေါ်ဆော့ဖ်ဝဲအသစ်ပြောင်းခြင်းနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုသင်ခံစားနိုင်သည်, ဒီ operating system ကိုအဖြစ်။
၎င်းစာရင်းတွင် 3.538MB RAM တပ်ဆင်ထားကြောင်းဖော်ပြထားသည်။, 4GB အကြောင်းကိုအကျဉ်းချုပ်သောအတူတူပင်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်၎င်းသည် Snapdragon 1.77 ဖြစ်သည့် Snapdragon 845 ဖြစ်သည့်ရှစ် core core Qualcomm ပရိုဆက်ဆာနှင့်အခြေခံကြိမ်နှုန်း ၁.၇၇GHz ဖြစ်သည်။ flagship မကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ရရှိသောရမှတ်များနှင့် ပတ်သက်၍ စမတ်ဖုန်းသည်စျေးကွက်ရှိအခြားအထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနည်းငယ်မျှသာသေးသည်၊ အလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းကဲ့သို့သော Xiaomi က Redmi5Pro ကိုမှတ်ချက် ဖေဖော်ဝါရီလလယ်တွင်တင်ပြခဲ့သည်။ ပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း Single-core အပိုင်း ၂,၄၂၆ မှတ်နှင့် multicore အပိုင်း ၈,၃၅၅ ခုသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်.
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဂူးဂဲလ်သည်၎င်း၏ပိုမိုအဆင့်မြင့်သောဗားရှင်းကိုတင်ပြနိုင်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မီးမောင်းထိုးပြထားသည်၎င်းတွင် 6GB RAM ရရှိသည်။ ၎င်းသည်စွမ်းအင်ပိုမိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဒီ Pixel3XL ဟာပိုကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့ဈေးအပေါဆုံး version သာဖြစ်နိုင်တယ်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ အမေရိကန်ကုမ္ပဏီသည်အောက်တိုဘာလတွင်ကျွန်ုပ်တို့အား၎င်းကိုရှင်းလင်းပေးလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Google Pixel3XL သည် GeekBench တွင်ပေါက်ကြားခြင်း - Android P ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
အခြားသူများကစားရန် MagiCats Builder ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်အဆင့်များကိုဖန်တီးပါ